अम्रिसो खेतीबाट फलिफाप ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अम्रिसो खेतीबाट फलिफाप !
२०७१ बैशाख २९, सोमबार ०१:२७ गते
शक्तिखोर । शक्तिखोर ५ का कृष्णबहादुर चेपाङ मध्यदिनमा अम्रिसोको कुचो बाँध्न व्यस्त थिए । चर्को घामको कुनै मतलब नै नराखी कृष्ण कुचो बाँधिरहेका थिए ।
घर छेउमा रहेको ४ कठ्ठा पखेराबारीमा लगाएको अम्रिसो यस वर्ष धेरै नै फुलेपछि कृष्णबहादुर निकै हौंसिएका छन् । किनकी यसपटक उनले ४ कठ्ठामा लगाएको अम्रिसोबाटै झण्डै ७० हजार कमाउने आशामा छन् ।
फागुन महिनामा अम्रिसोको फूल थुतेर अहिले कुचो बाँध्न व्यस्त उनी कुनै समय कुल्ली काम गर्थे । घर छेउमै रहेको स्थानीय सामुदायिक वनको कार्यालय परिसरमा उनले बाँधेका कुचोहरु जम्मा गरेर राखिएको छ ।
अरुको नियन्त्रणमा रहेर काम गर्न गाह्रो भएपछि उनले कुल्ली काम छाडेका रहेछन् । पखेराबारीमा अम्रिसो लगाएका उनले तीन वर्ष अघिदेखि कुचो बेच्न थालेका हुन् । सुरूको वर्ष जम्मा ६÷७ हजारमात्र आम्दानी भएको बताउने कृष्णबहादुर यस वर्ष टन्न कमाउने आशामा छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मेरो मनको हिसाव गर्ने हो भने वार्षिक ७० हजारदेखि माथि कमाइ हुन्छ ।’ ‘यस वर्ष एक हजार कुचो बेच्ने तयारी गर्दैछु, उनले भने, ‘आठ सय बढी बाँधिसके अब केहीमात्र बाँकी छन् ।’
कुचो बिक्रीका लागि नारायणगढ र काठमाडौं लैजाने उनको योजना छ । काठमाडौंसम्म पु¥याउन सकेमा एउटा कुचोको मूल्य १०० रूपैयाँ हात पर्ने उनले बताए । नारायणगढमा कम्तीमा पनि ८० को दरमा बेच्ने उनले बताए ।
कुचो लिनका लागि बजार क्षेत्रबाट गाउँमै व्यापारी पुगेपछि आफूले कुचो नदिने कृष्णबहादुर बताउँछन् । व्यापारीले सस्तोमा लिएर जाने र थोरै मेहेनतमा पनि टन्न नाफा कमाउने हुँदा जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि आफैँ कुचो बेच्ने सुरमा छन् उनी ।
अन्य खेतीबालीलाई जस्तो औषधी, मलजल र धेरै स्याहारसुसार आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसो त मौसमले पनि यस खेतीलाई खासै प्रभाव पार्दैन । सामान्य गोडमेल गरेको भरमा अम्रिसो तयार हुन्छ । अम्रिसो खेतीबाट आम्दानी बढ्न थालेपछि उनी यस पेशामा झनै हांैसिएका छन् ।
पछिल्लो केही वर्ष आफ्नै मिहिनेतमा रमाइरहेका कृष्णबहादुरको पौरखी काम देखेर गाउँले पनि दंग परेका छन् । उमेरले ४५ पुगेका कृष्णबहादुरका श्रीमती र १२ वर्षका एउटा छोरा छन् । सन्तान सुखका लागि भनेर उनले १० वर्षअघि नै परिवार नियोजन गरेका रहेछन् ।